Maleeshiyaadka Shabaabka oo Degmada Baardheere ku Xirxay Dad Beeraley ah | KEYDMEDIA ONLINE
Maleeshiyaadka Shabaabka oo Degmada Baardheere ku Xirxay Dad Beeraley ah
Kismaayo (Keydmedia) - Maleeshiyaadka Kooxda xag jirka ah ee Shabaabka ayaa howlgallo ay ku beegsanayaan dadka deegaanka waxaa ay ka bilaabeen gudaha iyo nawaaxiga degmada Baardhee ee gobbolka Gedo.
Maleeshiyaadka ayaa si gaar ah u beegsanaya dadka Beeraleyda ah ee beeraha ka qota Jiinka wabiga ku yaalada degmada Baardheere.
Ilaa hadda inta la xaqiijiyay in kabadan 80 qof oo isugu jira ragg dumar ayay Maleeshiyaadka Shabaabka ku soo aruuriyeen xabsiyada ay ku leeyihiin magaalada Baardheere.
Waxaa jirta xiisad ka dhalatay qab qabashada ay Maleeshiyaadku ku hayaan dadka deegaanka taasoo ilaa hadda ka taagan duleedka degmada Baardheere halkaasoo dad iskood isku abaabulay ay sheegeen inay dagaal lagalayaan Maleeshiyaadka Shabaabka.
Degmada Baardheere waxaa ku suggan wafdi uu hogaaminaayo dhagar qabe Cali Maxamuud Raage oo ah Afhayeenka Kooxda Shabaabka waxaana uu halkaasi ka wadaa howlgallo dadka deegaano xoolahooda si qasab ah looga qaadayo.